Iska hor-imaad caawa ka dhacay magaalada Dhuusamareeb Xilli uu booqasho ku joogo Kheyre | HalQaran.com
Iska hor-imaad caawa ka dhacay magaalada Dhuusamareeb Xilli uu booqasho ku joogo Kheyre
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya, in caawa Magaalada uu ka dhacay iska hor imaad u dhaxeeyay ciidamo.
Iska hor imaadkan ayaa wuxuu ka dhacay afaafka hore ee Xarunta Inji oo ay degan yihiin madaxda Ahlu Sunna, kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen Ciidamada illaalada madaxda Ahlu Sunna iyo Ciidanka Nabad Suggida.
Sidoo kale, wararka ayaa sheegaya, in iska hor imaad labaad uu dhexmaray Ciidamada NISA ee Galmudug iyo Ciidanka joogay xarunta Inji ee Ahlu Sunna.
Wararka qaar oo Saraakiisha Ahlu Sunna laga soo xigtay, ayaa tilmaamaya in Ciidamada dowladda ay soo weerareen xarunta Inji, balse Ciidanka Ahlu Sunna ay iska caabiyeen, inkastoo uusan jirin warar madax banaan oo arrintaasi xaqiijinaya.
Illaa hadda lama oga Khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca ee ka dhashay iska hor imaadkii caawa ka dhacay Magaalada Dhuusamareeb
Iska hor imaadka caawa ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ayaa ku soo aadaya, xilli Ra‘iisul Wasaare XF Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre uu ku sugan yahay Magaaladaasi.
DEG DEG: Iska hor-imaad caawa ka dhacay magaalada Dhuusamareeb